ဟိုနားဒီနား ခရီးသွား (ညောင်လေးပင်သို့) ၃ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » ဟိုနားဒီနား ခရီးသွား (ညောင်လေးပင်သို့) ၃
ဟိုနားဒီနား ခရီးသွား (ညောင်လေးပင်သို့) ၃
Posted by Diamond Key on Apr 21, 2012 in Local Guides, Photography, Travel | 16 comments
စိန္ေသာ႕ရဲ႕ ခရီးသြားမွတ္တမ္း စိန္ေသာ႕ရဲ႕ ရိုက္ခ်က္
ညောင်လေးပင်မြို့လေးရဲ့ သင်္ကြန်ကာလ အတွင်းမှာ အမြဲတွေ့ရတတ်တာ တစ်ခုက စုပေါင်းရဟန်းခံ ရှင်ပြုပွဲလေးတွေပါ။
ရဟန်းလောင်း၊ မောင်ရှင်လေးတွေ အများကြီးနဲ့ မြို့ထဲကို လှည့်ပါတယ်။ မောင်ရှင်လောင်းလေးတွေအားလုံးက မြင်းကိုယ်စီနဲ့၊ ရှင်လောင်းလှည့်ရမှာပါတဲ့ သူတွေအားလုံးကတော့ ခြေလျှင်လျှောက်ပြီးတော့ပေါ့။ မြန်မာ့ရိုးရာမပျက် ရှင်လောင်းလှည့်ပွဲလေး တွေ့ရတော့ ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။
ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရတာက မောင်ရှင်လောင်း အပြင်အဆင် ထူးခြားမှုလေးတွေပါ။ မြန်မာ့နေရာ အနှံ့က ရှင်လောင်းလှည့်ပွဲလေးတွေကို တွေ့ဖူးတဲ့ ကျွန်တော်အတွက် တစ်နေရာနဲ့ မတူ တစ်နေရာမှာ တစ်ကြောင်းတစ်ဂါထာ၊ တစ်ရွာ တစ်ပုဒ်ဆန်း ဆိုသလို မတူထူးခြားတာလေးတွေ တွေ့ဖူးပါတယ်။
တစ်ချို့မြို့ရွာတွေမှာက မောင်ရှင်လောင်းကို ဘုရင်တွေလို ဝတ်စားဆင်ယင်ကြသလို၊ တစ်ချို့နေရာတွေမှာတော့ နတ်သားလေးတွေလို ဝတ်စားဆင်ယင်တာ တွေ့ဖူးပါတယ်။ တစ်ချို့နေရာတွေမှာက မောင်ရှင်လောင်းတွေကို ကုန်းပိုးပြီး ရှင်လောင်းလှည့်ကြသလို တစ်ချို့နေရာတွေမှာက စက်ဘီးနဲ့၊ ဝေါနဲ့၊ လှည်းနဲ့၊ ကားနဲ့ အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံပါပဲ။
အောက်က ပုံလေးတွေကတော့ ညောင်လေးပင် ရှင်လောင်းလှည့်ပွဲက မောင်ရှင်လောင်းလေးတွေရဲ့ အလှတွေပါ။ ပန်းစိုတွေနဲ့ ဝေနေသူပါသလို၊ ရောင်စုံပန်းခြောက်လေးတွေနဲ့ ဆင်ယင်ထားတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ထူးထူးခြားခြား သတိထားမိတာကတော့ ပုသိမ်ထီးဆောင်း မောင်ရှင်လောင်းတွေနဲ့ ဘိုးသူတော်လောင်းလေးတွေကိုပါ။ ချစ်စရာလေးတွေပါပဲ။
ရှင်လောင်းလှည့်ပွဲက ကွမ်းတောင်ပန်းတောင် အလှုငွေကိုင်လေးတွေ
စံပယ်ပန်းတွေ ဝေနေတဲ့ မောင်ရှင်လောင်း
ထူးခြားတဲ့ အပြုံးနဲ့ ဘိုးသူတော်လေး
ကိုသော့ရေ ညောင်လေးပင်ကို ဝင်လည်သွားတယ်နော် ….မအားတဲ့ကြားထဲကနေပြီးတော့ ….
မအားတဲ့ ကြားက အရောက်လာသွားသူရေ….. Thanks.
နောက်ဆိုရင် ပုံနံပါတ်လေးတွေ တပ်ပေးလိုက်ပါ့မယ် ကိုပေါက်ရေ။
ကျနော်ကိုလဲ အဲလို လုပ်ပါလို့ မာမီက အကြံပေးခဲ့တာကိုသော့ရဲ့
ပုံတွေတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျ၊ ရွာသူ ရွာသားများဓာတ်ပုံရိုက်တော်ကြပါပေတယ်ဗျာ၊
ပန်းတွေနဲ့ ဝေ နေတဲ့ ရှင်လောင်းမျိုး တခါမှ မမြင်ဘူးဘူး။
ရိုးရာ ဓလေ့နဲ့ တူတယ်နော်။
ဖိုးသူတော်လေးကလည်း ချစ်စရာ ကောင်းလိုက်တာ..
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ရေတွေ ပက်နေတာ ဘယ်လို ထွက်ရိုက်လဲ ကင်မရာတွေ ရေစိုမှာ ကြောက်ဘူးလား။
ဆူး သူငယ်ချင်း ကို ဦးလေး ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေ ပြပြီး ဒီးဒုတ်ကို သွားဖို့ ညွန်လိုက်တာ.. ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီနေ့ မတိုင်ခင်က မုန်တိုင်းဝင်သွားလို့ ရေတွေက ရန်ကုန်မြစ်ထဲကလိုပဲ ဝါပြီး ညစ်နေတယ်။ ရေပြာတာလည်း သူတို့ မမြင်ခဲ့ကြရှာဘူး။
ကန်နွမ် ကင်မရာ အကောင်းစားလေး ဆိုလား ခြေချော်ပြီး ရေထဲ ပြုတ်ကျသွားတာ Lens ထဲကို ရေဝင်ပြီး ဝါးသွားတယ်။ ဆိုင်ပို့ပြီး ပြင်လို့ မရဘူး ပြောတယ်။
အဲဒီ မှန်ဘီလူး က လေဟာနယ် ထားတယ် ဆိုလား.. အဲဒီထဲကို ရေဝင်သွားလို့ ဖြုတ်လိုက်ရင် auto focus အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး ဆိုလို့ ဘာလုပ်ရမလဲ စဉ်းစားဆဲ စဉ်းစားလတ္တံ ဖြစ်နေတယ်။ ဟိဟိ။
အဟင့် ………… နော့်ကို တရားခံဖြစ်အောင် မလုပ်နဲ့နော် …….
ဒါကြောင့်ပြောပါတယ် …. ဟိုသွားရင် အသောက်အစားမလုပ်နဲ့လို့ ….. ဦးပေါက်ကြီးတောင် ၂ကြိမ် ချော်လဲတာ ဝန်ခံထားတယ်လေ ….. ဒါပေမယ့် သူက လူသာ လဲမယ် ကင်မရာတော့ ရေထဲမကျအောင် အပေါ် မြှောက်ရက်ကလေးပဲ နောက်ဆို လူကြီးတွေ ဆီက အတွေ့အကြုံ ယူခိုင်းနော်
အသောက်အစားတော့ ပါဘူး ထင်ပါတယ်။
ရေတွေက အပြောနဲ့ အလုပ်မညီလို့ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်နေကြတာ ချော်လဲပြီး ရေထဲ ပြုတ်ကျတယ် ဆိုလား ပြောတယ်။
ရှင်လောင်းလှည့်ပွဲက ကွမ်းတောင်ပန်းတောင် အလှုငွေကိုင်လေးတွေ ချောတယ် ကိုစိန်သော့ရေ
လေးလေးစိန်က ညောင်လေးပင်မှာ အလှူသွားလုပ်တာ ခေါ်တောင်မခေါ်ဘူး။ လိုက်လည်မှာစိုးလို့ထင်တယ်။ ဖိုးသူတော်က ပြုံးတာမဟုတ်ပဲ မြင်းပေါ်တင်လို့ မဲ့နေတာလားမသိဘူးနော်…
အဲဒါ ………… ဖိုးသူတော် “အိတ်ကျံ” လို့ခေါ်တယ်။
ရန်ကုန်သင်္ကြန်မှာ ပျော်နေမယ့်သူတွေမို့ မခေါ်တာပါနော်
သင်္ကြန်ကွန်တော်လည်းညောင်လေးပင်..မြို ့နားရောက်ခဲ ့တယ်ဗျ….
အနီးနားရွာမှာတော့…ရှင်လောင်းကိုမြင်းနြ ့လှည့်တာမတွေ ့ဘူး…ခုံလေးပေါ်ထိုင်တာတွေ ့ခဲ ့ရတယ်
ကျေးဇူးဗျ..အမှတ်တယတွေ ကြည့်ခွင့်ရလို ့
ချစ်စရာလေးတွေ။ ကျေးဇူးပါ။ ရှားရှားပါးပါးမြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု့လေးတွေမို့ကူးထားလိုက်ပါတယ်။